Bit By Bit - Mifehy - 6.7.1 Ny IRB dia gorodona, tsy nisy valindrihana
Betsaka ny mpikaroka no mihevitra fa mifanohitra amin'ny IRB. Etsy andaniny, heveriny ho toy ny fandefasana birao. Na izany aza, dia mihevitra azy ireo ho fanapahan-kevitra farany amin'ny fanapahan-kevitra ara-moraly ihany koa izy. Izany hoe, maro ny mpikaroka no mino fa raha ankatoavin'ny IRB izany, dia tsy maintsy atao tsara izany. Raha ekentsika ny fetran'ny fetran'ny IRBs amin'izao fotoana izao-ary misy maro amin'izy ireo (Schrag 2010, 2011; Hoonaard 2011; Klitzman 2015; King and Sands 2015; Schneider 2015) -hay toy ny mpikaroka no tokony handray andraikitra fanampiny ho an'ny etikan'ny fikarohana. Ny IRB dia tany tsy misy ny valindrihana, ary io hevitra io dia misy fiantraikany lehibe roa.
Voalohany, ny efamira IRB dia midika fa raha miasa ao amin'ny andrim-panjakana izay mitaky ny famerenana ny IRB ianao, dia tokony hanaraka ireo fitsipika ireo ianao. Toa miharihary izany, saingy hitako fa misy olona te hisoroka ny IRB. Raha ny marina, raha miasa amin'ny sehatra tsy misy saina ianao, ny IRB dia mety ho mpiara-miasa mahery. Raha manaraka ny fitsipik'izy ireo ianao, tokony hijoro ao ambadikao izy ireo dia tokony hanao zavatra tsy mety amin'ny fikarohanao (King and Sands 2015) . Ary raha tsy manaraka ny fitsipiny ianao, dia mety hianjera amin'ny tenany manokana amin'ny toe-javatra tena sarotra.
Faharoa, ny IRB dia tsy valiny midika fa tsy ampy fotsiny ny famolavolana ny endriny ary manaraka ny fitsipika. Amin'ny toe-javatra maro ianao no mpikaroka no ilay mahafantatra indrindra ny fomba fihetsika ara-moraly. Farany, ianao no mpikaroka, ary ny andraikitry ny etika dia miara-miaina aminao; Ny anaranao no ao amin'ny taratasy.
Fomba iray hahazoana antoka fa hitondranao ny IRB ho toy ny etona ianao fa tsy ny valindrihana dia ny mampiditra appendice etika ao amin'ny taratasinao. Raha ny marina, afaka mamolavola ny appendice etika ianao alohan'ny fianaranao dia efa manomboka, mba hanery ny tenanao hieritreritra ny fomba hanazavanao ny asanao amin'ny mpiara-mianatra aminao sy ny vahoaka. Raha hitanao fa tsy mahazo aina ianao rehefa manoratra ny appendice etika, dia mety tsy hitazona ny fandanjalanjana ara-ethique ny fianaranao. Ankoatra ny fanampiana anao hamantatra ny asanao manokana, ny famoahana ireo appendices etika dia hanampy ny fikambanana mpikaroka momba ny olana etetika ary hametraka fitsipika mifanaraka amin'ny ohatra avy amin'ny fikarohana ara-tsosialy marina. Ny latabatra 6.3 dia manolotra fikarohana ara-tsosialy izay heveriko fa manana fifanakalozan-kevitra tsara momba ny etika fikarohana. Tsy miombon-kevitra amin'ny isan-milaza ny mpanoratra ao amin'ny fifanakalozan-kevitra ireo, fa izy ireo ohatra ny mpikaroka rehetra miasa amin'ny tsy fivadihana amin'ny heviny voafaritra ny Carter (1996) : isaky ny tranga, (1) ny mpikaroka manapa-kevitra izay mihevitra ny tsara ary inona no tsy mety; (2) mandray andraikitra amin'ny fanapahan-kevitr'izy ireo, na dia amin'ny vola manokana aza; ary (3) ampisehoany ampahibemaso fa manao zavatra mifanaraka amin'ny fandinihan-dry zareo momba ny toe-draharaha.
Tabilao 6.3: Resadresaka niadian-kevitra momba ny fitsipi-pikarohana
Rijt et al. (2014) Fikarohana ara-java-tsoa tsy misy fanekena
Mialà amin'ny loza voajanahary
Paluck and Green (2009) Fihetseham-pahaizana amin'ny sehatra an-dalam-pandrosoana
Fikarohana momba ny lohahevitra sarotra
Famerenana ny loza mety hitranga
Burnett and Feamster (2015) Fikarohana tsy misy fanekena
Mitombo ny risika sy ny tombontsoa rehefa sarotra ny hamantatra ny loza
Chaabane et al. (2014) Ny fiantraikany ara-sosialy amin'ny fikarohana
Mampiasà rakitra mibaribary
Jakobsson and Ratkiewicz (2006) Fikarohana ara-java-tsoa tsy misy fanekena
Soeller et al. (2016) Fomban'ny tolotrasa